ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်သမျှ - Hello Sayarwon
Update Date နိုဝင်ဘာ 19, 2020 .3mins read
ဆီးချိုက အမျိုးအစား တစ်ခုမကပါဘူး။ ဒီ ဆီးချို အမျိုးအစားထဲမှာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချိုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အထူး ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုက ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချိုပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆီးချို ခံစားရမယ်ဆိုရင်မိခင်ရော ဘေဘီလေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေချာလေး ဂရုစိုက် ကာကွယ်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုဆိုတာက ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ မဖြစ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာမှ ဖြစ်တဲ့ ဆီးချို အမျိုးအစား တစ်ရပ်ပါ။ ပုံမှန်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ဒုတိယ ၃ လပတ်နဲ့ တတိယ ၃ လပတ် ကာလတွေမှာ အများဆုံး တွေ့ရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချိုဖြစ်စေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုက ကိုယ်တွင်းမှာ အင်ဆူလင် လုံလောက်အောင် မထုတ်နိုင်တာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆေင်ချိန်မှာတောင် အင်ဆူလင်ကို လုံလောက်စွာ ရရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုကို ကာကွယ်ဖို့ သတိထားရမယ့် အချက်တွေ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေက အသက် ၃၅ နှစ်နဲ့ အထက်ရှိနေမယ်။ အဝလွန်နေမယ်။ ဆီးချို မျိုးရိုး ရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က အစောပိုင်းမှတြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချို စစ်ဆေးဖို့ ညွှန်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါမှလည်း မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာမှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းကပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသော အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၂၄ ပတ်ကနေ ၂၈ ပတ်ရောက်လာတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချို ရှိနေလားဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ အခုလို စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ရပါမယ်။
ဒီစစ်ဆေးမှုမှာ သကြးရည်တွေ သောက်ရပါမယ်။ ၁ နာရီလောက်ကြာတဲ့အခါ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို စစ်ဆေးပါမယ်။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်က ၁၉၀ milligrams per deciliter (mg/dL) ဒါမှမဟုတ်၁၀.၆ millimoles per liter (mmol/L) ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချို ရှိနေတာပါ။
တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချို ခံစားရပြီဆိုရင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုသေချာ ထိန်းညှိဖို့ လိုပါမယ်။ လိုအပ်ရင် ဆရာယန်က အင်ဆူလင် ဖိုးဖို့၊ မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ သောက်သုံးဖို့ ညွှန်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံလို့ အိုးပစ်အိမ်ပစ် ပြေးရတဲ့အခါ ဆေးဝါးတွေကိုပါ သယ်သွားရမှာပါ။ ဒါကြောင့် အရေးပေါ်ဆေးအိတ် ပြင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ စက်တင်ဘာ 3, 2021 .3mins read
အင်ဆူလင် နှင့် အလွဲများ ............................ သင်ရော ဘာတွေ မှားသိထားသေးလဲ ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်လား...........
ဆီးချို သွေးချို, ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ စက်တင်ဘာ 1, 2021 .2mins read
ခြေစွယ် လက်စွယ်ငုပ် တာက သာမန်ပဲ၊ ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းတာ မရှိဘူးဆိုရင် အောက်ကနည်းလမ်းတွေနဲ့ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အသားအရေနှင့် အလှအပ, လက်သည်းခြေသည်း ထိန်းသိမ်းခြင်း ဩဂုတ် 31, 2021 .2mins read